Marka Psychopaths ay shaqo tagaan | Martech Zone
Marka Psychopaths ay shaqo tagaan
Axad, Agoosto 6, 2006 Jimco, Abriil 23, 2021 Douglas Karr
Qaar badan oo ka mid ah asxaabteyda ugu dhow iyo asxaabteyda waxay ogyihiin inaan soo maray waayo-aragnimo aad u xun oo aan uga tagayo shaqo-bixiye aniga in yar kahor. Dadka qaarkiis ayaa laga yaabaa inay la yaabaan sababta ay dadweynuhu si fudud ugu socon kari la'yihiin wax sidaas oo kale ah. Marka loo shaqeeyahaasi yahay urur aad u ballaadhan waxay u egtahay inuu si isdaba joog ah ugu soo noqdo oo uu ku xasuusiyo. Ilaa aad ka baxdo magaalada mooyee, waxaad sii wadi doontaa inaad maqasho 'erayga wadada' wixii dhacay ka dib markii aad ka tagtay. Inaad ka tagto wershadaha ma aha ikhtiyaar - tani waa waxa aan u sameeyo nolol.
Marka aad tahay nooca qofka aan kala soocin shaqada guriga oo aad wax walba oo aad haysato ku shubeyso shaqadaada - xaalad sidan oo kale ah way adag tahay in laga tago. Inaga inteena ka tagtay, dhamaanteen waan ku heshiinay wixii dhacay. Laakiin qaar ka mid ah dadka waayeelka ah ee tagay ayaa leh nabarro aad u qoto dheer oo aan xitaa u adkeysan karin inay qado aadaan oo ay la hadlaan inteena kale. Bal ka fikir sida xaaladdu u xun tahay inay u dhaawacdo qof sidaas oo kale ah.
Waxaan ahay nin quruxsan oo faraxsan. Waan jeclahay shaqadayda waana jeclahay waxa aan qabto. Laakiin markii la i xasuusiyo waqtigaas shaqadayda, kama caawin karo laakiin waxaan la yaabaa sababta qofka masuulka ahi uu weli u maqan yahay oo uu weli waxyeello u geysanayo. Daraasiin dad waaweyn ah ayaa meesha ka baxay, waaxdii horay ugu guuleysatay abaalmarino ayaa hadda burbursan, waxqabadka shirkaddana wuu ku sii yaraanayaa taas darteed. Hase yeeshe… Qofka mas'uulka ka ah ayaa weli ah. Runtii tani sir ayey ii tahay.
Waxaan shalay buug ka soo qaatay Xuduudaha: Masaska Dacwadaha, Marka Cilmi-nafsiga loo aado Shaqada. Waxaan ku aqriyay hordhaca aniga oo sugaya saaxiibada qaar waxaan go aansaday inaan iibsado buugga. Xaqiiqdii waxay ahayd xiisaha ka badan isku dayga inaan sharaxo waxa igu dhacay. Runtii iskuma dayin inaan laba iyo laba isku daro. Laakiin markaa waan aqriyaa tan:
“Qof kastaa ma jecla Helen, dabcan, qaar ka mid ah shaqaalaheeda kuma kalsoonaan. Waxay kula dhaqmi jirtay asxaabta yar yar nacayb iyo qiyaas xaqiraad ah, inta badan waxay ku jees jeesaa awooddooda iyo kartidooda. Kuwa ay u aragtay inay waxtar u leeyihiin xirfadeeda, si kastaba ha noqotee, waxay ahayd mid naxariis badan, mashquulsan, baashaalna leh. Waxay hibo u lahayd inay u soo bandhigto dhinaceeda wanaagsan kuwa ay dareento inay muhiim tahay, intaasoo dhan oo ay inkirayaan, ay dhimayso, iska tuurayso, ayna barakicinayso cid kasta oo aan ku raacsanayn go'aannadeeda
Helen waxay soo saartay sumcad u sheegida shaqaalaha shirkadaha waxay rabaan inay maqlaan, kulamada maaraynta masraxa ee kooxda fulinta sida haddii ay yihiin wax soo saar Hollywood ah. Waxay ku adkaysatay in warbixinnadeeda tooska ah ay raacaan qoraalladii lagu heshiiyey, iyadoo dib ugu dhigaysa wixii su'aalo lama filaan ah ama adag. Sida laga soo xigtay asaaggeeda, Helen waxay ku fiicneyd maaraynta aragtida, waxayna si guul leh u maamushay maamulaheeda, cabsi gelisay warbixinnada tooska ah, waxayna la ciyaartay shaqsiyaad muhiim u ah iyada. ”
Labadan tuduc waxay macno ahaan ii direen qaboojiyaha dhabarkayga. Ma hubo in buugani iga caawin doono inaan cafiyo oo aan illaawo wixii aniga iyo dad badan oo wanaagsan igu dhacay, laakiin laga yaabee inuu iga caawin doono inaan si fiican u fahmo. Weli kama maqlo hoggaamiyeyaasha ururka iyo shirkadda oo mar wada shaqeyn jireen asxaabteyda la ixtiraamo - taas oo ka soo horjeedkeeda ah, gabi ahaanba la iima oggola inaan la xiriiro iyaga.
Laga yaabee inay soo qaadan karaan buuggan, akhrin karaan, oo ay laba iyo laba isku dari karaan. Shaki kuma jiro, waxay ku imaan doonaan isla garashada aan hada u imid.
Waxay la shaqeyn karaan maskaxiyan.
Ka Dalbo Masaska Dacwadaha Amazon
Tags: cilmi nafsigacilmi nafsigaabeesooyin suudh ah
Saamaynta Digg: Gunaanad It Ma Caawisaa?
Celcelis ahaan Dhallinyarada?
Nov 21, 2008 at 2: 45 AM
Qoraal xiiso leh, mahadsanid weli ma lihin wax xun oo aniga igu dhacay!
Weligaa ma ka akhrisay fikradda ah "isafgarad macmal ah" ..
Shirkadaha qaar dhibaatooyinka lama kulmo waan is fahmi karnaa maxaa yeelay waa inaan, si aan u kasbano qolof. Marka arrimaha bulshada xitaa lama hadli doontid qof gaar ah laakiin shaqada ayaa lagugu qasbay. Kaliya fekerka kor u qaadista laakiin xakameynta tan waqti dheer waxay sababi kartaa hindisooyin maskaxeed.
Nov 23, 2008 at 11: 28 AM
Aniga oo ah dhibbane kale oo ka mid ah tagitaan naxdin leh, aad ayaan ula dhacsanahay xaaladda Doug, waana qaddarin karaa inta ay ku qaadaneyso bogsashada. Aniga, sidoo kale, wali waxaan halkaan ku xantaa wixii dhacay ilaa tagitaankeyga, in kastoo xusuusaha ay yaraadeen, waligey gebi ahaanba kama gudbi doono waxyeelada la ii geystey (kuwa aan khibrad u helin, waad nasiib badan tahay - inaad tahay dhibanaha ka shaqee a-godad, ama kalsooni darro wada-shaqeeyeyaasha ama kuwa ku jira meeqa sare, waxay dareemayaan in lagu kufsaday, lagu dhacay, lagu garaacay, oo lagaa tagay). Hal dariiqo ayaa ah inaad dhahdo "khasaarahooda" iyo "Waan ka xumahay iyaga." Waxaan sidoo kale u maleynayaa "kuwa halista ah ee noloshayda ka dhigay mid aan loo dulqaadan karin sanadahaas oo dhan waa inay runtii leeyihiin arrimo isku kalsooni leh oo si adag uga shaqeeya sameynta nolosha wax ku biiriyaha wanaagsan cadaabtaas oo kale." Fikradahaas oo dhami waxay iga caawiyeen inaan bogsiiyo - laga yaabee inay adiga ku caawin doonaan, sidoo kale, Doug.